अनौंठो रेष्टुरेण्ट : जहाँ बिकिनी लगाएका युवतीले खाना ल्याउँछन् ! (फोटोफिचर) - Sagarmatha Online News Portal
एजेन्सी । संसारमा व्यपार व्यवसाय बढाउनका लागि अनेक किसिमका आईडियाहरु प्रयोग गरिएका छन् । धेरैभन्दा धेरै ग्राहकहरुलाई आफ्नो व्यवसायमा कसरी आकर्षण गर्ने भनेर नयाँ नयाँ तरिकाहरु अपनाउँदै अनेक खालका रेष्टुरेण्ट खुलेका छन् ।
भर्खरै चीनमा दुनियाँलाई अनौठो लाग्ने एक रेष्टुरेण्ट खुलेको छ । त्यो रेष्टुरेण्ट यत्ति अनौठो छ की देख्ने बित्तिकै सबैलाई जाउँजाउँ लाग्छ । चीनको स्यांग शहरमा अवस्थित डाओजियांग रेष्टुरेण्टले ग्राहकलाई आकर्षण गर्नका लागि अनौठो उपाय अपनाएको छ । रेष्टुरेण्टमा ग्राहक छिर्ने बित्तिकै दंग पर्दछन् ! किनभने उक्त रेष्टुरेण्टमा कार्यरत कर्मचारी युवतीहरु बिकिनी लगाएर अडर लिन ग्राहकको टेबुलमा सत्कार गर्दै आइपुग्छन् । ‘सुन्नुस त तपाईले अडर गर्नुभएको खाना आइपुग्यो’ भन्दै सुन्दर वेट्रेसहरु बिकिनीमा खानेकुरा लिएर ग्राहकलाई टक्राउँन आईपुग्छन् ।
त्यत्ति मात्र होइन बिकिनीमा सजिएका युवती वेटरको शरीरमा रेष्टुरेण्टको नाम पनि कुँदिएको छ । बिकिनी वेट्रेसको नयाँ आइडिया लगाएसँगै उक्त रेष्टुरेण्टमा ग्राहकको संख्या थामिनसक्नु छ । खासगरी पुरुष ग्राहकहरु बिकिनी लगाएर सर्भ गर्न आउने वेट्रेसहरु देख्दा निकै रोमाञ्चित हुने गरेको बताएका छन् । अहिले उक्त रेष्टुरेण्टको व्यापार दिनप्रतिदिन बढिरहेको सञ्चालकले बताए ।
Published On: १० असार २०७६, मंगलवार 664पटक हेरिएको